အောင်လံ သဲအင်းဂူရိပ်သာ ဆရာတော် အရှင်စန္ဒိမာ ၏(KL, Malaysia)မှ အွန်လိုင်းတရားပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အောင်လံ သဲအင်းဂူရိပ်သာ ဆရာတော် အရှင်စန္ဒိမာ ၏(KL, Malaysia)မှ အွန်လိုင်းတရားပွဲ
အောင်လံ သဲအင်းဂူရိပ်သာ ဆရာတော် အရှင်စန္ဒိမာ ၏(KL, Malaysia)မှ အွန်လိုင်းတရားပွဲ
Posted by True Answer on Dec 1, 2011 in News | 8 comments
မူလသဲအင်းဂူဆရာတော်ကြီး၏တပည့်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ၀ိပဿနာဥာဏ်အရာမှာ ထင်ရှားကျော်ဇောသော အောင်လံမြို့ သဲအင်းဂူ တရားရိပ်သာမှ အရှင်စန္ဒိမာ(အောင်လံ) သည် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့သို့ ကြရောက်ကာ ကမ္မဌါန်း တရား၊ ၀ိပဿနာတရား များကို နှစ်ရက်တိုင်တိုင် ဟောပြောသင်ကြားပြသပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်သည် ရဟန်းတရားကို ကြီးမားသော သဒ္ဓါ-၀ီရိယ-သတိ-သမာဓိ-ပညာ တို့ဖြင့် အားထုတ်ထားသော ထူးခြား ထက်မြက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လေသည်။
ဆရာတော်သည် မြန်မာပြည်တွင် တရားစခန်းအဓိဋ္ဌာန်ပွဲများနှင့် မအားသည့်ကြား မှ မလေးရှားကိုအချိန်ပေး၍ လာရသောကြောင့်၊ မလေးရှားမှ တရားအားထုတ်လိုသူများနှင့် အွန်လိုင်းမှတဆင့် တရားနာကြားနိုင်သူများ အတွက် ကံထူးနေကာ တရားနာယူ တရားနားလည်ခွင့် ရှိနေပါသည်။
http://www.justin.tv/kotseikkosit မှ တိုက်ရိုက်တရားနာယူနိုင်ပါပြီ။
ဆရာတော် အရှင်စန္ဒိမာ(အောင်လံ)၏ အဓိဋ္ဌာန် တရားစခန်း အစီအစဉ်
နေ့ရက် – (၀၃.၁၂.၂၀၁၁)နှင့် (၀၄.၁၂.၂၀၁၁)စနေ-တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်တိုင်တိုင်။
နေရာ – ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်စစ်(ကမ္မဋ္ဌာန်းရိပ်သာ)
No.18, Jalan 13/105, (near Jalan Midah 15), Taman Midah Cheras, (near TESCO) Kuala Lumpur.
အွန်လိုင်းမှလွင့်ချိန် – http://kotseikkosit.multiply.com တွင်ကြေညာဖော်ပြထားပါမည်။
– မိတ်ဆွေ-သင်သေတတ်ပြီလား၊ မွေးလာပြီရင်သေရပါမယ်။ ဘယ်ကလာလို့ ဘယ်ပြန်မှာလဲ။
– သူများသေတာ ကိုယ်တစ်နေ့သေမယ်လို့ တွေးမိပါရဲ့လား။
– သင်သေလျှင် ဘာစိတ်နဲ့သေမည်နည်း။ ဘာတွေကို အာရုံပြု သေမှာလဲ။
လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ၊မာန၊ ကိလေသာစိတ်တွေနဲ့ သေပြီး အပါယ်ကျရမှာပါ။
– ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်စစ်ပါ။ မေ့မေ့လျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ဆဆ မနေကြဘဲ ….
မဂ္ဂင်တရားအားထုတ်ခြင်းဖြင့် ဘ၀နေနည်း ၊ သေနည်း ကို လေ့လာဖို့ အချိန်တန်လေပြီ။
၀ိပဿနာတရားတော်ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်လျှက် ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်ကြပြီး ပကတိငြိမ်းအေးချမ်းသာကြပါစေ။
ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်စစ် ကမ္မဋ္ဌာန်းရိပ်သာ
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ခုလို တင်ပြပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းပါစေလို့ တိုက်ရိုက်နာကြားနိုင်အောင် ဆုတောင်းပေးပါဦးနော်။
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်စစ် ရိပ်သာလိပ်စာ အခုမှ မြင်ဖူးတော့တယ်။ ကျေးဇူးပါ။ အရှင်စန္ဒိမာ(အောင်လံ) ရေးတဲ့ ဝိပဿနာစာအုပ်များတော့ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ဖူးပါ၏။။။။။
သဂျီးရေ…ဆရာတော့် တရားတပုဒ် ဆုံးအောင်နားထောင်နိုင်ရင် သဂျီးပြုထားတဲ့ အပြစ်တဝက်ကြေဖို့ ယမမင်းထံ အီးမေးလ်ပို့ပေးမယ်။။။။။။။ အကြောင်းအမြန်ပြန်ပါ။။။
မြန်မာထေရ၀ါဒတွေ ကိုးကားတဲ့.. ပဋိကတ်သုံးပုံလုံးထဲမှာမှ… လက်ချိုးရေလို့ရလောက်အောင်ပဲ.. စာလုံးအရေအတွက်ပါတဲ့.. ၀ိပဿနာကို.. ဘယ်လိုချဲ့ချဲ့.. မနာချင်တော့ပါဘူးဗျာ…
ယမမင်းဆီပဲ ပျော်ပျော်ကြီး အမှတ်ပြည်နဲ့… လယ်လယ်သွားလိုက်မယ်..။
မငတ်ဖူးတဲ့လူက ဆာလောင်တဲ့ ဒုက္ခကို မသိဘူးတဲ့။
(ယမမင်းဆီပဲ ပျော်ပျော်ကြီး အမှတ်ပြည်နဲ့… လယ်လယ်သွားလိုက်မယ်..။)
ဆိုတဲ့ စကားကို တနေ့ ၁နာရီ တရားရှု့မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ သဂျီးဆီက ကြားရတာ အံ့သြမိတယ်။
တနေ့ ၁နာရီ တရားရှု့မှတ်တယ်လို့ တခါမှ မပြောဖူးပါဘူးကွယ်..။
ဒီလောက် တိတိကျကျ တလုံးချင်း.. ဒစ်ဂျစ်ပါမှန်အောင် စစ်ဆေးနိုင်တဲ့.. ခေတ်မှာတောင်… ၂လလောက်ကြာတာနဲ့..လွဲကုန်ရင်.. နှစ် ၂၅၀၀ကျော်က တရား.. ဘယ်လောက်လွဲမလည်း.. တွေးကြည့်ဖို့ပဲ..။
အဲဒါကြောင့်.. နိုင်ဂျံဂါးကနေ စောင့်ပြီးလည်း.. ဆရာတော်ကြီးတွေဆီမှာ.. တပါးချင်း ချည်းကပ်မေးလျှောက်ဖူးခဲ့တယ်…။
အဲဒါနဲ့…နေမယ်ဆိုရင်..။..သွားမယ်ဆိုရင်…။ သေနည်းဆိုတာ..တကူးတကန့် ကိုမလိုတော့ဘူးလို့ထင်မိတယ်..။
နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်က
စကားလုံးတွေကို တစ်လုံးချင်းစစ်ပြီး ။
ဆရာတော်တွေ တပါးချင်းလိုက်မေးနေတဲ့ သဂျီး….
စကားလုံးကို တရားထင်နေတဲ့ သဂျီး ….
စကားလုံးတွေကို ကြံဖန် အထ အန ကောက်ပြီး…..
စကားလုံးတွေကို ဆီလိုအပေါက်ရှာ အပြစ်ရှာ တင် ကဲ့ရဲ့တတ်တဲ့သဂျီး…
စကားလုံးတွေထက် ကျော်လွန်တဲ့ သဘာဝကို …..မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့
ယမမင်းဆီက လွတ်လာတဲ့ တစ်နေ့နေ့လား….
(မှတ်ချက်။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် သူ့ရှေ့ကြွလာရင်တောင် ဘာအထောက်အထား နဲ့ ဘယ် digital instrument နဲ့ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်မလဲ လို့ ဘုရားရှင်ကို ပြန်မေးမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ သဂျီးပါ)း))
သေနည်း ဆိုတာ ကတော့ အလောဘ-အဒေါသ-အမောဟစိတ်နဲ့ သေတတ်ဖို့ပါ။ သေခါနီးရောဂါဝေဒနာ နှိပ်စက်ချိန် ဒေါသ-သောက-ဗျာပါဒ မဖြစ်ဘဲ အေးချမ်းတဲ့စိတ် (နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့စိတ်) ယောနိသောမနဿိကာရ စိတ်နဲ့ သေတတ်ဖို့ပါ။
သူလိုငါလို လောဘ-ဒေါသ နဲ့ သေလို့ ကတော့………
လောဘ-ဒေါသ တို့ရဲ့ လားရာပေါ့။
သဲအင်းဂူဆရာတော်ကြီးကတော့ လူတစ်သိန်းသေလို့ သုဂတိတစ်ယောက်မရောက်ပါဘူးတဲ့။